Vaovao - hetsi-pananganana vondrona Hebei Tomato 2019
Hebei Tomato dia nanangana ny hetsika fananganana vondrona lehibe indrindra tamin'ny taona 9 ka hatramin'ny 13 Aogositra 2019.
Mba hampanan-karena ny fotoana iasan'ny mpiasa, hanamorana ny tsindry asa, hanatsara ny fifandraisana sy ny fifandraisana eo amin'ny samy mpiasa, ny fanamafisana ny firaisan'ny ekipa sy ny hery centripetal ary ny fandaminana hetsika fananganana vondrona tsy hadino ao Hebei Tomato.
Tamin'ny andro voalohany dia nahemotra ny sidina noho ny toetr'andro. Soa ihany fa tonga soa aman-tsara izahay.
Tamin'ny andro faharoa, dia nita ny fiara tsy mataho-dalana namaky ny tanety Hulunbeier tsy misy olona izahay, tonga teo amin'ny havoana amoron'ny reniranon'i Mozhgrad, ary nanandrana ny «Fetin'ny Valo Valo» ho an'ny Fanasana sy ny Valo-polo Vintana. Ny tolakandro dia nitsidika ny Tany Lemaka Erguna aho, namakivaky ny Black Forest Island, ala boar dia, alaoka kininina, nosy vorona, ny lalana Kang, ny ranomasina voninkazo sy ny toerana mahafinaritra hafa. Mikoriana mangina ny renirano madio ary ny rano miolakolaka dia manodidina ny ahitra sy ny morontsiraka. Ny kirihitra dia kirihitra sy maitso. Tongava any Genhe amin'ny hariva ary andramo ny fikolokoloana wok. Aorian'ny sakafo feno dia mijanona ao amin'ny tranokely nandrasana hatry ny ela.
Tamin'ny andro fahatelo dia nitsidika voalohany ny Lulu Guya Reindeer Park izahay, izay antsoina hoe "foko mihaza" farany ao Shina. Io no firenena tokana ao Shina izay manainga serfa. Tonga ao amin'ny Sahuan Ranch amin'ny mitataovovonana izy, mamaky ny ala birch, ary miditra ao Montenegro amin'ny hariva ary miaina mitaingina soavaly. Ny fety mahafinaritra, hariva amin'ny afo, mankafiza ny tsiron'ny ondry manontolo natsatsika, miaina ao anaty yurt, miaina ireo hetsika mahafinaritra amin'ny fomba Mongolianina.
Tamin'ny andro fahefatra, teo amoron'ny renirano Erguna nivelatra, dia nandeha tamin'ny lalan'ny sisintany Sino-Rosiana izahay. Ilay toerana kanto teny an-dalana dia nanamaivana ny faneren'ny mpiasa. Nanitatra ny tratra ny ala midadasika ary nanatsara ny firaisanay. Amin'ny hariva any Manzhouli, mankafy ireo seho tsara tarehy any ivelany.
Tamin'ny andro fahadimy dia nitsidika ny fifaninanana mpitaingin-tsoavaly tao amin'ny foko Mongoliana Balhu izy, ary namarana ny hariva ny hariva.
Tamin'ny alàlan'ity hetsika fananganana vondrona ity dia nihalalina ny firaisan'ny mpiasa sy ny fahombiazan'ny ady, ary ny fifandraisana tsy misy dikany teo amin'izy ireo dia nihalalina. Nohamafisina ny fifankahazoan-kevitra, nanjary nanjary akaiky kokoa ny fihetseham-po, ary ny olona rehetra nilentika tamina fanjakana tsaratsara kokoa sy hafanam-po kokoa. Amin'ny asa ho avy dia nohamafisinay ny fahatokisanay sy ny fahavononantsika hanamafy an'i Hebei Temet.